Unogona kuisa iyo TAR Archive zita zvakananga kana tinya bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yekuchengetedza faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo TAR yekuchengetedza faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
Iwe unogona kuisa iyo yakamisikidzwa dura refaira faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza yakamisikidzwa dura refaira.
Baya bhatani, uye DataNumen TAR Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi TAR Archive. Kufambira mberi kubhawa